Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Södermanlands län / Nyköping
Nyköping waxeey ku taala xeebta agteeda, dhinaca koonfurta hal saac ee jirtaa Stockholm. Uu dhawnaanshaha ayadoo la adeegsanaayo goobta dulimaadada Stockholm Skavsta, jasiiradooyinka yaryar iyo baadiyaha-dhaqameed ee sörmland waxeey ka dhigaayaan goob deegaan oo soo jiidasho leh.
2,066 kiilomitir oo laba jibaaran
Norrköping 62 kiilomitir
Södertälje 69 kiilomitir
Markii la iska dhaafo Nyköpingshem, waxaa sido kale jiro shirkada guriyaha ee HSB, Peab, Rikshem iyo Kungshem.
Af carabi, af finish, af soomaali, af iswiidish, af thayland iyo af tigrinya.
Inta waxaa ku yaalo ururka soomaalida ee Nyköping, ururka Somaliland, ururka Thaylandiga ee Nyköping iyo Oxelösund, ururka finish ee Nyköping, Iswiidhiska-Finaland ee Nyköping/Oxelösund, Ururka samafalka Afar, Ururka Boosniyaanka ee Behar, xarunta-dhaqanka Islaamiga.
Xafiiska-adeega bulshada ee degmada waxuu ku yaala xaafadaha Brankärr iyo Arnö. Waxaa jiro jiheeye-bulshadeed oo ku hadlo af soomaali iyo af carabi. La shaqeeyo xarunta-reerka oo leh dugsi xanaaned furan oo ku yaalo xaafadahaan. Sido kale waxaa jiro xarunta caafimaadka hooyoyinka iyo caruurta.
Xafiiska-shaqada, xafiiska adeega bulshada, booliska iyo adeega badbaadinta iyo kuwo kale oo ka howl galo hal shabakad oo shaqadeed.
Dukaamo badan oo gacan labaad ayaa ka jiro meesha.
Nyköping waxeey lee dahay dugsi xanaaneed badan oo sii fiican ku bandhigan bogga degmada.
Degmada iyo maamulka Gobolka waxay heshiis la leeyihiin Adeegga luqadda ee Semantix.
Shaqo bixiyayaasha ugu waaweyn marka laga reebo degmada Nyköping iyo maamulka Gobolka Sörmland waa Schneider Electric Sverige AB, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Studsvik AB, Eberspächer Exhaust Technology Sweden iyo ABB AB Cewe-Control.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Nyköping